राजनीति – doodhmati || dudhmati
एमाले-माओवादी एकता प्रक्रिया लम्बिने
January 7, 2018	राजनीति, समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस २३ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्ब्याइदिँदा एमाले-माओवादी एकता प्रक्रिया पनि लम्बिने भएको छ। नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रियालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन चाहेका दुई पार्टी एकताका विषयमा समय लिएरै छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी …
दूधमती समाचारदाता जनकपुरधाम, पुस १४ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेशसभाका लागि दशजनाको नाउँ सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएको नाउँहरुमा बविता चौधरी, निलम देवी भुमिहारिन, अन्जु कुमारी, पुनम यादव, विभा ठाकुर, डा. डिम्पल झा, राम नरेश राय, जानकी शरण साह, राम प्रवेश बैठा, लैला खातुन रहेका छन । सिफारिसमा केही …
राप्रपाले सिफारिस गर्‍यो तीन प्रदेशसभा सदस्य
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस १४ । राप्रपाले प्रदेशसभाको तीन समानुपातिक सदस्य चयन गरेको छ । राप्रपाले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ प्रदेश १, ३ र ६ मा एकएक सिट पाएको छ । सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ मा इन्दिरा राई, ३ मा रीता माझी र ६ मा शोशीला शाहीको नाम सिफारिस भएको …
माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा समानुपातिकमा पर्ने ३५ जना टुंग्यायो, को को परे ? (नामावलीसहित)
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस १४ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा तर्फका समानुपातिक सांसदहरुको नाम टुंगो लगाएको छ। ललितपुरको खुमलटारस्थित पुष्पकमल दाहाल निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले ७ वटै प्रदेशका सांसदहरु चयन गरेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले टुंगो लगाएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको नामावली शुक्रबार नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ। …
संघीय फोरमले प्रदेश सभामा छान्यो १३ सांसद, आज आयोगलाई बुझाउने
दूधमती समाचारदाता जनकपुरधाम, पुस १४ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक तर्फका सांसदहरुको टुङ्गो लगाएको छ। फोरमले प्रदेश नं २ मा ९ सिट जितेको थियो भने प्रदेश १ र ५ मा दुई/दुई सिटमा जित हात पारेको थियो। फोरमको बैठकले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको टुङ्गो लगाएको फोरम …
December 25, 2017	राजनीति, समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस १० । कांग्रेस-एमालेबीच विवाद देखिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधिमा मध्यमार्गी धारबाट सहमतिको खोजी सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने वा एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा गर्ने भन्नेमा विवाद बढेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर थन्किएको अध्यादेशको भविष्य र नयाँ सरकार गठनमा निरन्तर अवरोध देखिन थालेपछि दलहरू मध्यमार्गी बाटोबाट …